ကြမ်းတမ်းတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေဟာရုပ်ဆိုးစရာမလိုပါဘူး MOM | နဲ့ NOMU ကသက်သေပြနေတယ် Androidsis
မိုဘိုင်းဖုန်းများသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုမိုစျေးကြီးသည်။ သို့သော်တိုးတက်မှုများသည် terminal ကို၎င်း၏ယခင်မော်ဒယ်များထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ရည်ရွယ်သောကြောင့်၎င်းစျေးနှုန်းများသည်သုံးစွဲသူများမျှော်လင့်ထားသင့်သည်များမျှော်လင့်ထားသင့်သည့်အတိုင်းအတာနှင့်စျေးကျဆင်းခြင်းကိုခုခံနိုင်စွမ်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းကိုဘယ်သောအခါမျှထင်ဟပ်ခြင်းမရှိ။
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရကြမ်းတမ်းသောဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ်လမ်းဘေးမျာကိုaကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည် ကျနော်တို့ estestically မှန်ကန်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရာကနေအလွန်ဝေးကြောင်းဒီဇိုင်း။ အနည်းဆုံးယခုအထိ။ NOMU ကုမ္ပဏီသည်မကြာမီစတင်တော့မည်ဖြစ်သည် NOMU M6၎င်း terminal ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပါးလွှာမှုတို့ကြောင့်ထင်ရှားသော terminal တစ်ခုဖြစ်သောဤ terminal အမျိုးအစားတွင်ရှာရန်ခက်ခဲသည်။
NOMU M6 အသစ်သည်အသွင်အပြင်အရမှန်ကန်သောစမတ်ဖုန်းများတံခါးဖွင့်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိပ်ကမ်းများကြုံတွေ့ရနိုင်သောအခက်အခဲများ၊ ပြိုလဲမှုများနှင့်အခြားမတော်တဆမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ NOMU M6 M810-STD-68G စစ်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှု၊ IPXNUMX ရေခုခံနိုင်မှုကိုပေးပါသည် နှင့်အားလုံးဒီ terminal ကိုဤအမျိုးအစား၏ရှေ့တန်းမှမှာထည့်လေ့မရှိသည့်စိတ်ကူးဒီဇိုင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်။
NOMU M6 ရဲ့နောက်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ် မှန်ကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်, Terminal ကိုသက်ရောက်မှုအမျိုးအစားများမှကာကွယ်ပေးသောရိုးရာကြမ်းတမ်းသောရာဘာ / ပလပ်စတစ်အစားစက်မှုဇုန်ဆက်တင်များတွင်သီးသန့်အသုံးပြုခွင့်မပြုဘဲပုံမှန်အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုနေ့စဉ် အသုံးပြု၍ လုံခြုံရေးနှင့်အတူ ငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းတယ်
NOMU ၏အကြီးအကဲအဆိုအရ M6သည် ကြမ်းတမ်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အစဉ်အလာကိုကြည့်ပြီးပြတ်သွားတယ် 3D curve နှင့်တောက်ပသောမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သောထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့်မှန်ကဲ့သို့နောက်ကျောဖုံးကို အသုံးပြု၍ သင့်ကိုအလွန်ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းနှင့်ပါးလွှာပြီးအထူ 10mm သို့ရောက်ရှိသည်။
NOMU ၏ S နှင့် T series များကဲ့သို့ M6 ၏မျက်နှာပြင်သည် ပျော့ပျောင်းသောရော်ဘာဘောင်ဖြစ်သော Corning Gorilla Glass3မှကာကွယ်မှုပေးထားသည် ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်စစ်ရေးနှင့်ရေကြောင်းကာကွယ်မှုအပြင်ဆိပ်ကမ်းကိုရေတံခွန်များမှကာကွယ်ရန်။ ယခုအချိန်တွင်ပရိသတ်များအတွက်ဒီ terminal အသစ်၏စျေးနှုန်းကဘာလဲဆိုတာမသိရသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင့်အားအသိပေးမည်။
သငျသညျလိုလျှင် NOMU M6 အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အကြမ်းခံစမတ်ဖုန်းများသည်ရုပ်ဆိုးစရာမလိုပါ။ M6 နှင့် NOMU ကသက်သေပြသည်
Nomu M6 သည် MIL-STD-810G အရည်အသွေး၊ IP68 ရေစိုခံမှုနှင့်အရေးအကြီးဆုံးသောအပြင်ပန်းဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်ထိုးဖောက်ထိုးဖောက်နိုင်သောကိရိယာဖြစ်သည်။
dual-glossy အဖုံးဒီဇိုင်းနှင့် # IP6 ရေစိုခံတန်းနှင့်အတူ #NOMU # M68 ??
#Nomu # M6
NOMU က M6 ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုကိုထုတ်ဖော်ပြသသောအခါကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ အခုငါဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ စတိုင်နှင့်ခက်ခဲတဲ့။ အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ။
အပြင်ပန်းဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာ NOMU ကိုတော်ဝင်ပရိတ်သတ်တွေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီ၌ NOMU ဖုန်းရှိသည်။ M6 ကကျွန်တော့်ဇနီးဝယ်ယူမှုစာရင်းပြီးပြီ။
ပြီးခဲ့သည့်လက MWC သို့သွားခဲ့သည်, NOMU အခြားထုတ်ကုန်အသစ်များကိုမြင်တော်မူ၏။ အလွန်သဘောကျ S50 စီးရီးများ၊ အဆင့်မြင့်ကြမ်းတမ်းသောဖုန်းများကြောင့်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ NOMU သည်ပိုမိုဖက်ရှင်ကျပြီးအဆင့်မြင့်သည်။
IP68 နှင့် MIL-STD-810G အသိအမှတ်ပြုထားသော အဆိုပါရေစိုခံ function ကိုအာမခံသည်။ drop-proof performance သည် NOMU ၏ယခင်ဖုန်းများကဲ့သို့ကောင်းမွန်သလားမှန်ပါသည်၊ မှန်ကဲ့သို့သောအဖုံးတစ်စုံတစ်ခုကိုစွန့်လွှတ်သင့်သည်ဆိုပါစို့။
မျှော်လင့်ချက် NOMU သည်ဖုန်းကိုကင်မရာအမြင့်များဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် အမြဲတမ်း 8MP ရှိသင့်သည်။ ဒီမှလွဲ။ ကြွင်းသောအရာကျေနပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ခွင်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်ဒုတိယဖုန်းကိုအမြဲတမ်းလိုချင်သည်။ ဒါကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။ ရေစိုခံနိုင်ခြင်းနှင့်ရေစိုခံခြင်းတို့သည်ပြင်ပအားကစားများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ။
Youtube ပေါ်ကကြမ်းတမ်းတဲ့ဖုန်းကိုရှာနေတာ NOMU M6 ပေါ်လာတယ်။ ၎င်းသည်သာမာန်ကြမ်းတမ်းသည့်ဖုန်းနှင့်အလွန်ကွာခြားသည့်လှပသည့်ကြမ်းတမ်းသည့်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ငါအံ့သြသွားတယ်
အလွန်စတိုင်ကျသောကြောင့်လူကြိုက်များသော 18:9display design ရှိလျှင်ပိုကောင်းသည်။
S50 တွင် 18:9display design and and android 8.1 ရှိပါသလား။